>US officials meet Daw Suu
> ထိုင်းသို့ နောက်ဆုံးရောက်လာသော လှေစီးရိုဟင်ဂျာများကို ဒဏ်ရာပရပွဖြင့်တွေ့ရ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉ယမန်နေ့က ရနောင်းမြို့ ဆေးရုံတွင် တွေ့ရသော ရိုဟင်ဂျာများ။ ၎င်းတို့က ပင်လယ်ပြင်ခရီးတွင် မြန်မာရေတပ် စစ်ရေယာဉ်များနှင့်တွေ့ပြီး ကျွန်းတကျွန်းတွင် ယာယီထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရကြောင်း၊ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၂၀ စီ အပေးခံခဲ့ရကြောင်း ဘီဘီစီ မြန်မာဌာန သတင်းထောက်ကို ပြောပြခဲ့သည်။်(ဓာတ်ပုံ – AP) No tags for this post. Related posts No related posts.
>Nay Choo – Tin Moe, the great guest from haven to earth 05
> ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး – ၅နေခြူးဇန်နဝါရီ ၂၇၊ ၂ဝဝ၉ အဲဒါဖြစ်ပြီး တပတ်လောက် အကြာမှာ ဝေမိုး ကျနော့်ဆီ ရောက်လာတယ်။ သူက ပြန်လွတ်လာတာ မကြာသေးဘူး။ လွတ်လွတ်ပြီးချင်း ဘုန်းကြီးဝတ်တော့ ကျနော်နဲ့ ဆရာကြီးတို့ သွားကြသေးတယ်။ အခု သူက ဘုန်းကြီးထွက်ခါစ အိမ်မှာ အနားယူနေတဲ့ အချိန်။ ကျနော့်ဆီတော့ မကြာခဏ လာတတ်တယ်။ အခု လာတာကတော့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပါ။ ”အကို့ကို လူတယောက်က တွေ့ချင်လို့ တဲ့။ အရေးကြီးတယ်။ လျှို့ဝှက်တွေ့ရမှာ..”။ တွေ့မယ် သူ ဘယ်သူလဲ လို့မေးလိုက်တော့ သူက ”ဘယ်သူလို့ မပြောရဘူးလို့ မှာလိုက်တယ်။ တွေ့ရင် သိမှာပဲ။” ဒါဆို ငါမတွေ့တော့ဘူးကွာ။ မင်းပဲ စဉ်းစားကြည့်။...
>Nay Choo – Tin Moe, the great guest from haven to earth 04
> ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး – ၄နေခြူးဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၉ ၁၉၉၈ သင်္ကြန်အပြီးလောက်မှာ ဆရာကြီးရဲ့ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတယောက်ရဲ့သမီး မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ သူ မြင်းခြံသွားရမယ့်အကြောင်း ပေါ်လာတယ်။ ဆရာကြီးညီမ အန်တီစန်းလည်း ရန်ကုန်ရောက်နေပြီး သူနဲ့အတူ မြင်းခြံ ပြန်မယ်။ ကျနော့်ကို သူနဲ့လိုက်ဖို့ ဆရာကြီးက အတင်းခေါ်တယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ သမီးတွေကလည်း သူတို့ အဖေနဲ့အဒေါ် လူငယ်အဖော် မပါပဲ ခရီးသွားရမှာ ပူနေတာနဲ့ ကျနော် လိုက်သွားနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ကျနော်ကလည်း မြင်းခြံထောင်က ထွက်လာတော့ အထဲက ရဲဘော်တွေကို စားစရာ ပေးချင်တာနဲ့ အကြောင်းဆုံပြီး လိုက်သွားဖြစ်ရော ဆိုပါတော့။ ကျနော်တို့ကို ဆရာကြီး သမီးတွေက အဝေးပြေးဂိတ်အထိ လိုက်ပို့ကြတယ်။ မမိုးအေးရဲ့...
> ယမန်နေ့က ကြတ်သည့်နေ မြန်မာပြည်မှ မြင်ရဓာတ်ပုံသတင်းဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၉ယမန်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော နေကြတ်ခြင်းကို ကြည့်ရှုနေကြသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ ကိုရင်ငယ်များ။ယမန်နေ့က ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ပါရှိခဲ့သော နေကြတ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်း။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ဦးသန့် ရာပြည့် ကာတွန်း ကလျာမိတေဇန်န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ဦးသန့် နှစ် ၁၀၀ မွေးနေ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာမှာ ပြုလုပ် မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ တတိယမြောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ကွယ် လွန်သူ ဦးသန့်ရဲ့ နှစ်တရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ နေရာက ဖရီးမောင့်မြို့ မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ ဓမ္မ ရိပ်သာမှာပါ။ ဒီပွဲကို ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရာရှိ လူငယ်များက ဦးဆောင် ကမကထပြုလုပ်ကာ ကျင်းပကြတာပါ။ ဦးသန့်အကြောင်းကို လူငယ်တွေပိုမိုသိရှိစေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျင်းပကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်ဉာဏိက၊ ဆရာဦးလှမင်း၊ ဆရာကိုထိန်လင်းနဲ့ ဆရာမင်းဇင်တို့က ဟောပြောကြပါတယ်။ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန် (MoeMaKa Interview)...
> ကဗျာချိုး ဆေးလိပ်ချိုး ဆရာမိုး ကိုကိုအောင် (ဆန်ဖရန်စစ္စကို) ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ ဆေးလိပ် သောက်တာ မကျန်းမာ ရွံလည်း ရွံစရာ ငွေကုန် သံပြာ ချောင်းတွေဆိုး သောက်ဟဲ့ သေခြင်းဆိုး တင်မိုး … တင်မိုး … ဤကား ဆရာတင်မိုးရေးခဲ့သည့် ကဗျာ နောင်လာနောင်သား မှတ်စေဖို့ စေတနာထားပြီး သူ မှာသဗျို့ သူအဖို့တော့ ဆေးလိပ်စွဲ မိုက်လက်စနဲ့ မိုက်မှာပဲ တဲ့။ ပြောမယုံ ကြုံမှသိ မယုံမရှိနဲ့ ကိုယ်တွေ့ တဲ့ သေတဲ့အထိ ဆေးလိပ်ညှိ သောက်ဘိ သောက်၏။ ဆရာတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း၂ နှစ်မြောက် အလွမ်းပြေ ကိုကိုအောင်(ဆန်ဖရန်စစ္စကို) ဝ၁-၂၁-၂ဝဝ၉ Tags: ဆန်ဖရန် Related...
Page 844 of 909«1...842843844845846...909»